Waa maxay, sidee loo soo saaray iyo maxay adeegsataa tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta'? Cusbooneysiinta Cagaaran
In kasta oo shidaalka lafaha wali gacanta ku haya meeraheenna maanta, dib-u-cusbooneysiintu waxay ku sii jeedaan suuqyada dhammaan waddamada adduunka. Tamarta la cusboonaysiin karo waa kuwa aan wasakheyn deegaanka, oo aan dhammaan oo awood u leh inay ka faa'iideystaan ​​tamarta cunsurrada dhulka iyo hareeraheeda, sida qorraxda, dabaysha, biyaha, iwm. In koronto laga dhaliyo. Maaddaama shidaalka foosha uu dhammaanayo, dib-u-cusbooneysiintu waa mustaqbalka.
Maanta waxaan si qoto dheer uga hadlaynaa tamarta qorraxda Tamartaani waa, laga yaabee, inay tahay tan ugu isticmaalka badan aduunka dhanka dib u cusboonaysiinta. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeyso iyo isticmaalka kala duwan ee ay leedahay?
2 Sidee loo dhaliyaa tamarta qorraxda qorraxda?
3 Cunsurrada iyo waxqabadka
4 Isticmaalka tamarta qorraxda sawir-qaade
4.1 Nidaamyada sawir-qaadista ee ku xiran shabakadda
4.2 Isticmaalka kale ee tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta'
Kahor intaanan bilaabin sharaxaadda isticmaalkeeda iyo sifooyinkeeda, aan caddayno waxa tamarta qorraxda loo yaqaan 'photovoltaic solar' u tahay kuwa aan weli si fiican u aqoon. Tamarta qorraxda waa ta taas oo ah awood u leh inay ka faa'iideystaan ​​tamarta qorraxda qurubyada iftiinka si ay u soo saaraan tamar kaasoo markii dambe isu beddelay koronto. Ilaha tamartaani gabi ahaanba waa nadiif, sidaa darteed ma wasakhaynayso deegaanka ama kuma sii deyneyso gaasas waxyeello leh hawada. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay faa iidada weyn ee dib loo cusbooneysiin karo, taasi waa, qorraxdu ma daali doonto (ama ugu yaraan dhowr bilyan oo sano).
Si loo ururiyo tamarta qorraxda, waxaa la adeegsadaa baalayaasha ku shaqeeya cadceedda kuwaas oo awood u leh inay soo qabtaan fotonooyinka iftiinka ee shucaaca qoraxda una beddelaan tamar.
Sidee loo dhaliyaa tamarta qorraxda qorraxda?
Sidaan horeyba u soo sheegnay, si loo soo saaro tamarta sawir qaadaha, waxaa lagama maarmaan ah in la soo qabto fotonooyinka iftiinka ee shucaaca qoraxda leh loona badalo koronto si loo isticmaalo. Tan waxaa lagu gaari karaa habka beddelka sawir-qaadista iyada oo loo marayo isticmaalka qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda.
Qalabka qoraxda wuxuu u yahay cunsur muhiim ah unuga sawirka. Kani waa qalab semiconductor ah (ka sameysan silikoon, tusaale ahaan) oo aan u baahnayn qaybo dhaqaaqa, shidaal, ama buuq dhalin. Markii unuggan sawir-qaade ah uu si isdaba-joog ah u soo gaadho iftiinka, wuxuu nuugaa tamarta ku jirta fotonnada iftiinka waxayna caawisaa abuurista tamar, dejinta dhaqdhaqaaqa elektaroonigyada ku xanniban korantada gudaha. Markay taasi dhacdo, elektaroonikada laga soo ururiyay dusha sare ee unugyada sawir-qaadista waxay soo saaraan koronto joogto ah.
Maaddaama danab soosaarka unugyada sawir-qaadeyaashu ay aad u hooseeyaan (kaliya 0,6V), waxaa lagu dhejiyaa taxanaha korantada ka dibna lagu xiraa saxan dhalo ah oo ku yaal xagga hore iyo walxo kale oo u adkeysanaya huurka xagga hore. Gadaal (tan iyo inta badan waqtiga ayaa ku jiri doona hooska).
Mideynta taxanaha unugyada sawir-qaadista oo lagu daboolay agabyada la soo sheegay sameysid aaladda loo yaqaan 'photovoltaic module'. Heerkan waxaad horeyba u iibsan kartaa badeecada si aad ugu bedesho guddi qoraxda ku shaqeeya. Marka loo eego tiknoolajiyada iyo nooca isticmaalka laga sameeyay, qaybtani waxay leedahay aag dhererkeedu yahay 0.1 m² (10 W) ilaa 1 m² (100 W), celcelis ahaan qiyam tilmaam, iyo hoos u dhaca danabyada 12 V, 24 V ama 48 V waxay kuxirantahay arjiga.
Sida kor ku xusan, iyada oo loo marayo habka beddelidda sawir-qaadista, tamarta waxaa lagu helaa danab aad u hooseeya iyo toos u socda. Tamartaan looma adeegsan karo guriga, markaa waa lagama maarmaan in, hadhow, a qalabka korantada si loogu beddelo mid hadda lagu beddelayo.
Cunsurrada iyo waxqabadka
Qalabka ay ku yaalliin unugyada sawir qaadeyaasha waxaa loo yaqaannaa qoraxda qorraxda. Xirmooyinkaani waxay leeyihiin adeegsiyo badan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro tamar shaqsiyadeed, qoys ahaan iyo meherad ahaanba. Qiimaheeda suuqa waa qiyaastii 7.000 euro. Faa'iidada ugu weyn ee baallayaashaan qoraxda ku shaqeeya ayaa ah in rakibiddoodu ay aad u fudud tahay una baahan tahay dayactir yar. Waxay leeyihiin cimrigooda qiyaastii 25-30 sano, sidaas darteed maalgashiga si fiican ayaa loo soo kabsaday.
Qalabkaan qoraxda ku shaqeeya waa in lagu rakibaa goob sax ah. Taasi waa, meelahaas oo ku wajahan saacadaha ugu badan ee qoraxda maalintii. Sidan ayaan uga faa'iideysan karnaa tamarta qorraxda isla markaana aan u dhalin karnaa koronto badan.
Qalabka qoraxda wuxuu u baahan yahay batari kaas oo kaydiya tamarta la soo saaray si loogu isticmaalo saacadahaas aan iftiinka qorraxdu jirin (sida habeenkii ama maalmaha daruuraha ama maalmaha roobka).
Marka laga hadlayo waxqabadka rakibidda qorraxda sawir qaade, waxaa la dhihi karaa waxay ku xiran tahay gebi ahaanba jihaynta baalayaasha qoraxda, meelaynta iyo aagga juqraafi ahaan halka lagu rakibay. Saacadaha badan ee qoraxdu ka jirto aagga, ayaa tamar badan la abuuri karaa. Inta badan rakibaadda qoraxda waxay soo ceshadaan maalgashigooda qiyaastii 8 sano. Haddii nolosha waxtarka leh ee qoraxda ay tahay 25 sano, iyada ayaa is bixinaysa oo waxaad helaysaa in ka badan faa'iido kugu filan.
Isticmaalka tamarta qorraxda sawir-qaade
Nidaamyada sawir-qaadista ee ku xiran shabakadda
Mid ka mid ah adeegsiga ugu muhiimsan ee tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qorraxda' waa rakibidda dareeraha sawir-qaadaha iyo inverter-ka hadda shaqeeya oo awood u leh inuu u beddelo tamarta joogtada ah ee ka dhalata baalayaasha cadceedda una beddelo kan hadda jira si loogu soo bandhigo shabakadda korantada.
Qiimaha halkii kWh tamarta qoraxda way ka qaalisan tahay nidaamyada jiilka kale. In kasta oo tan wax badan iska beddeshay muddo kadib. Meelaha qaarkood oo tirada saacadaha qorraxdu ka sareyso, qiimaha tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qorraxda' ayaa ah tan ugu hooseysa. Waa lagama maarmaan inaad haysato khadadka kaalmada maaliyadeed iyo sharciga si aad u dheellitirto kharashka wax soo saarka. Dhammaadka maalinta, waxaan ka caawinaynaa meeraheenna in aan la wasakheyn oo laga fogaado isbeddelka cimilada iyo wasakheynta.
Isticmaalka kale ee tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta'
Iftiin. Isticmaalka kale ee tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' waa nalalka laga soo galo magaalooyin badan, meelaha nasashada iyo isgoysyada. Tani waxay hoos u dhigeysaa qiimaha nalalka.
Calaamadeynta. Tamarta noocan ah waxaa loo adeegsadaa soo noqnoqoshada sii kordheysa ee loogu talagalay calaamadaha waddooyinka taraafikada.
Isgaarsiinta. Tamartaan waxaa loo adeegsadaa munaasabado badan meelaha lagu celceliyo awooda mobilada, raadiyaha iyo telefishanka.
Korontada miyiga. Iyada oo gacan laga helayo nidaam dhexe, magaalooyinka ugu firidhsan iyo tuulooyinka yaryar waxay ku raaxeysan karaan koronto la cusboonaysiin karo.
Beeraha iyo xoolaha. Isticmaalka tamarta ee aagaggaas, tamarta qorraxda ee loo adeegsado sawir-qaade ayaa loo adeegsadaa. Si loo iftiimiyo, loo kaxeeyo biyaha iyo bambooyin waraab, si loo liso, iwm.
Sida aad u aragto, tamarta qorraxda sawir-qaade ayaa loo adeegsadaa meelo badan oo ka dhigaya inay sii kordheyso tartanka suuqyada waxaana loo tixgeliyaa mustaqbalka tamarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Waa maxay, sidee loo soo saaray iyo maxaa loo adeegsadaa tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa leh
Bio-construction, dhisme deegaan, caafimaad iyo hufnaan leh